... iintsuku endifuni ukuzenza ... - ii-Geofumadas
... iintsuku endifuni ukuzenza ...
NgoNovemba, 2010 Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa, Izopolitiko kunye nentando yeninzi
Ngenye impelaveki, inqanyuliweyo evela kwiifama zaseFumensville, ukusuka kwimisebenzi engapheliyo, ukusuka kwiindawo ezinqabileyo ezimele zifakwe eludongeni ...
Nangona inzima yezobupolitika, sonke sifuna ukunqwenela okubi ekugqibeleni.
Inja ephantse ibolekwe. Kubukeka ngathi ubizwa ngokuba nguFido, owathi umzalwana wam unikela njengenja, iminyaka ye-8 nangona wayengumlenze kwaye wayene 13.
Kwelinye icala lehlabathi. Mhlawumbi uhambo lwam lokugqibela kule ndawo efihliweyo apho ndikhumbula khona kakhulu inyama ebusikiweyo kunye nemozulu enomdla. Kuhlekisayo, umfanekiso webali "Iminyaka emibini kuphela" ivela kwipaki efanayo.
Hamba bayayithanda inja, inceba ukuba kufuneka uyibuyisele kusasa.
Iinyanga ze-17 zokubambisana ezilandelwa ngumgaqo-siseko, akukho nto icacileyo okwamanje.
Ukuba kukho into enokuthi sinokuyifumana kulo, kukuthi isilonda esibalulekileyo senziwa kwinkqubo yamabini amabini.
Kodwa emva kokubona ukuvela kwe-Farabundo Martí kwizinto ze-70 zonke ezinokuthi zenzeke ... ukudibanisa njengoko ukunyanzelisa okwenzileyo apho kuthatha iminyaka eyi-10, ukulwa nemfazwe yoluntu kuthatha iveki. Kulo mfanekiso, indoda endala iyakuthabatha udoti epakini, inika ingcamango yokwenza emva kwemikhosi yemikhosi.
Inkxwaleko yezopolitiko ihlala yonyaka wamahlulo, ukungcatsha kunye nokuhamba kwabantu abakulo macala malunga neminqweno ethile. Kukwaxhalabisa ukuba imeko yombhikisho iyaphela ukuba ibe yinto yokuchasene kwaye ngokunjalo unomdla wokunciphisa ukungathobeli, inkohlakalo kunye nezinye (ezininzi) ezimbi ...
Ngokungafani neempembelelo endizibonileyo kwenye indawo, iSonto lamaKatolika linomsebenzi ochaseneyo kunye nomanyano wootitshala ngabadlali abanobuchule abanokuzinyamekela.
Kwakhona kuyimfuneko ukufumana ukuthembela kwabantu abangafumani nabubele kwigraffiti kwiindonga kunye nezikhundla eziphambili ngaphandle kwesiphakamiso.
Kuba ngelixa ... ukutya kosuku ukuba UColonel Aureliano Ubuyela ekhaya emva kweentetho ze-Neerlandia.
Isobho se-Chicken ... kuya kuba nexesha lokungena kwi-geofumar. Okwangoku, ndiyasivuyela ezi zilwanyana, hleze zikhule kwaye andiyizi ukuba ndide ndibize ngomkhulu.
Post edlulileyo«Edlulileyo 9 Magazines kule geomatics eliphakathi
Post Next Facebook: iividiyo ukuba abahloli umhlabaOkulandelayo "